၀က်ဟမ်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်အပြီးမှာ ပွဲအပေါ် များစွာ သက်ရောက်မှုရှိခဲ့တဲ့ ဒိုင်လူကြီးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ၂ ခုကို ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ကလော့ - xyznews.co
၀က်ဟမ်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်အပြီးမှာ ပွဲအပေါ် များစွာ သက်ရောက်မှုရှိခဲ့တဲ့ ဒိုင်လူကြီးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ၂ ခုကို ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ကလော့
လီဗာပူး မန်နေဂျာ ယာဂန်ကလော့ဟာ မနေ့ညက ၀က်ဟမ်းကို ၃-၂ နဲ့ ရှုံးခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ ပွဲကို အကြီးအကြယ် လွှမ်းမိုးမှု ရှိစေခဲ့တဲ့ ဒိုင်လူကြီးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ၂ ခုကို ဝေဖန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ၀က်ဟမ်းဟာ လီဗာပူးရဲ့ ပြိုင်ပွဲစုံ ၂၅ ပွဲဆက် ရှုံးပွဲမရှိ မှတ်တမ်းကို ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ကာ ဒီပွဲစဉ်မှာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလည်း ပါ၀င်ခဲ့ပါတယ်။
ဂိုးသမား အလီဆွန် အတွက်တော့ မမေ့နိုင်စရာ နေ့တစ်နေ့ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၀က်ဟမ်းရဲ့ သွင်းဂိုး ၃ ဂိုး စလုံးမှာ အမှားမကင်းခဲ့ဘူးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ပွဲအစ ၄ မိနစ်မှာ ၀က်ဟမ်းတို့ ထောင့်ကန်ဘော ရခဲ့ပြီး အန်တိုနီယိုနဲ့ အော့ဘွန်နာ တို့ရဲ့ ဖိအားပေးမှုကို ခံခဲ့ရတဲ့ အလီဆွန်ဟာ ကိုယ့်ဂိုးကိုယ်ပြန်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ အလက်ဇန်းဒါးအာနိုးဟာ ပထမပိုင်း မပြီးခင် ဖရီးကစ်ကနေ လှလှပပ ကန်သွင်းခဲ့တာကြောင့် ပွဲဟာ ၁-၁ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဒုတိယပိုင်းမှာ ကစားပုံကောင်းခဲ့တဲ့ ၀က်ဟမ်းဟာ တန်ပြန်တိုက်စစ်ကနေ တဆင့် ဖော်နယ်က ဦးဆောင်ဂိုး သွင်းခဲ့ပြီး သိပ်မကြာမီမှာပဲ ကတ်ဇူးမားက ထောင့်ကန်ဘော ကနေ သွင်းယူခဲ့တာကြောင့် ၃-၁ နဲ့ ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လူစား၀င်ကစားသမား အိုရီဂီဟာ လီဗာပူးအတွက် ချေပဂိုးတစ်ဂိုး ပြန်လည် သွင်းယူပေးခဲ့ပြီး နာကျင်အချိန်ပိုမှာ မာနေး အပိုင်အခွင့်အရေး လွဲချော်ခဲ့တာကြောင့် ပွဲဟာ ၃-၂ နဲ့ ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ပွဲစဉ် အပြီးမှာ ကလော့ဟာ အလီဆွန်ရဲ့ own goal က ဒိုင်လူကြီးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် နဲ့ ဂျော်ဒန်ဟန်ဒါဆန် အပေါ် ခရက်စ်ဝဲလ် ရဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်မှုကို အနီကတ် မပြသခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ဝေဖန်သွားခဲ့ပါတယ်။
ကလော့က “ဒီနေ့မှာ အဓိက ကျတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပေးလိုက်ရတဲ့ ဂိုးနဲ့ တစ်ချို့ အခြေအနေတွေဟာ ဒါနဲ့ ပြောင်းပြန် ဖြစ်ရမှာပါ။ သူတို့ သွင်းယူခဲ့တဲ့ ပထမဂိုးဟာ ဂိုးသမားကို ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ပြီး ရသွားခဲ့တဲ့ ဂိုးပါ။ ဘယ်ကစားသမားလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် အတိအကျ မသိပေမယ့် သူ့ရဲ့ လက်မောင်းဟာ အလီဆွန်ရဲ့ လက်မောင်းကို ချိတ်ထားခဲ့တာကြောင့် သူ ဒီဘောလုံးကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဖမ်းနိုင်မှာလဲ? ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ လုံး၀ အဓိပ္ပာယ် မရှိပါဘူး။
အလီဆွန်ရဲ့ ရှေ့မှာ ၀က်ဟမ်း ကစားသမား ၂ ဦး ရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သူတို့ကို ရှင်းထုတ်လို့ မရပါဘူး။ အကယ်၍ ဂိုးသမားက သူတို့ကို ဖယ်ထုတ်လိုက်မယ် ဆိုရင် ပင်နယ်တီ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်နိုင်မှာလဲ? ဒါ့ကြောင့်လည်း ဂိုးသမားတွေကို ကာကွယ်ပေးထားတာပါ။
နောက်ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုဆိုရင်လည်း အာရွမ်ခရစ်စ်ဝဲလ်ဟာ ဂျော်ဒန်ဟန်ဒါဆန် အပေါ် ဆိုးရွားတဲ့ challenge လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ဘောလုံးကို အရင်ထိခဲ့တယ် ဆိုရင်တောင် ခန္တာကိုယ် ကိုတော့ ထိန်းချုပ်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက် ၂ ခုဟာ ပွဲအပေါ် များစွာ လွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ၀က်ဟမ်းက လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
အကယ်၍ ကစားသမား တစ်ဦးဟာ လက်မောင်းကို မြှောက်ပြီး ဂိုးသမားရဲ့ လက်ကို လာချိတ်တဲ့ အခါ ဒါဟာ foul ပါ။ ဒါဟာ ဂိုးသမား အတွက် အရေးပါတဲ့ ခန္တာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေကတော့ ဒီပွဲရှုံးလို့ အကြောင်းပြချက် ပေးတာလို့ ပြောကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ဘက်က အေးဆေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီပွဲကို ရှုံးနိမ့်ရလောက်အောင် အရမ်းကောင်းခဲ့တယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ ဒါကို ကျွန်တော် လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဒိုင်လူကြီး ဆီကနေ ပုံမှန် ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ လိုအပ်ပါတယ်။ သူ့အတွက်လည်း မဟုတ် ကိုယ့်အတွက်လည်း မဟုတ်တဲ့ မျှတတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။ သူ ဒါကို မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။” လို့ ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။
ချဲလ်ဆီးတို့ ဘန်လေနဲ့ ပွဲမှာ ရမှတ် ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်မှာ အခွင့်ကောင်း မရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ အပေါ် ကလော့ အနေနဲ့ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်နေမှာပါ။ ၀က်ဟမ်းဟာ ဒီနိုင်ပွဲကြောင့် အဆင့် ၂ နေရာက မန်စီးတီးနဲ့ ရမှတ်တူ အဆင့် ၃ နေရာကို တက်လာခဲ့ကာ လီဗာပူးကတော့ အဆင့် ၄ နေရာကို ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
Previous Article လန်ဒန်စတေဒီယမ်မှာ ကာလရှည် ရှုံးပွဲမရှိ မှတ်တမ်း ကျိုးပျက်ခဲ့တဲ့ ၀က်ဟမ်း ၃-၂ လီဗာပူး ပွဲစဉ်မှ ထူးထူးခြားခြား ပြောစရာများ
Next Article ဆိုးလ်ရှားဟာ ကစားသမား နှစ်ဦးကို သတ်နေတယ်လို့ အကြီးအကျယ် ထိုးနှက် စွပ်စွဲလိုက်တဲ့ အိုဟားရား